Tombony ho an'ny ankizy manana alika tokony ho fantatrao | Bezzia
Ny tombony lehibe ho an'ny ankizy manana alika dia ho tsikaritra hatramin'ny voalohany. Satria marina fa indraindray rehefa manana biby fiompy isika dia mieritreritra azy mihoatra ny indroa. Tsy fantatsika hoe ahoana izany firaisana eo amin'ny zaza sy ny biby izany, na dia fitsipika ankapobeny aza dia ho tsara toetra hatrany.
Ny ankamaroan'ny ankamaroany dia tia biby sy alika. Ka io dia efa famantarana tsara sy vaovao tsara kokoa. Fa izany ve aorian'izany rehetra izany misy fivoarana ara-tsaina hahasoa ny zanakao. Noho izany, tonga ny fotoana hahafantarana amin'ny fomba lalina ny tombony rehetra amin'ny fananana biby ao an-trano.
1 Ahoana ny fomba hanampian'ny alika ny ankizy: mampihena ny adin'izy ireo
2 Fahasalamana tsara kokoa ary vitsy kokoa ny allergy
3 Mahatsiaro ho voaro
4 Handroso bebe kokoa izy ireo
5 Lasa tompon'andraikitra bebe kokoa izy ireo
6 Manatsara ny fatorana mifamatotra izy ireo
Ahoana ny fomba hanampian'ny alika ny ankizy: mampihena ny adin'izy ireo
Rehefa mihalehibe amin'ny alika ny ankizy dia mamatotra fatorana tena manokana. Mazava fa ny sakaiza dia sakaiza tsara miaraka amin'ny ankizy ary ny mifamadika amin'izany. Noho izany dia mahatsapa ho voaro izy ireo, zavatra iray hampiakatra tsikelikely ny fahatokisan-tena izany ary toy izany dia hanamaivana ny fihenjanana mety hiseho na ny fitaintainanana manampy olana hafa. Ny famihina na fikasihana ny alika fotsiny dia hihena ity adin-tsaina ity. Ka io dia efa iray amin'ireo tombony lehibe tokony harahina.
Fahasalamana tsara kokoa ary vitsy kokoa ny allergy
Na dia marina aza fa mieritreritra isika fa raha manana biby fiompy dia hanana aretina vaovao sy maro karazana ny zava-drehetra, tsy izany. Raha ny marina, ny fanadihadiana dia manamafy fa ny mifanohitra amin'izay no marina. Toa iray amin'ireo tombontsoa lehibe ho an'ny ankizy ny fananana alika koa manampy fahasalamana tsara kokoa amin'ny ankapobeny, fa indrindra indrindra, ny fanesorana ireo allergy sasany amin'ny fiainantsika. Izany dia satria raha mbola kely dia efa miaina miaraka amin'ny biby izy ireo dia misy karazana tsimatimanota mivoatra ary mihatsara ny hery fiarovan'ny zaza.
Mahatsiaro ho voaro
Ireo kely dia hahatsapa ho azo antoka kokoa fa manana alika manodidina. Satria ireo manolotra anao izany fahatsapana filaminana izany. Satria ho eo foana izy ireo mandritra ny fotoana ilana azy ireo ary noho ny biby tsy hanafatra azy ireo na hanelingelina azy ireo, dia fantatr'izy ireo fa fanampiana tsy misy fepetra izany. Noho izany, ireo rehetra ireo dia mahatsapa ho tony kokoa izy ireo rehefa eo anilany ary mifandray amin'ny zavatra teo aloha izay noresahintsika momba ny adin-tsaina.
Handroso bebe kokoa izy ireo
Na dia marina aza fa ny ray aman-dreny dia ho ireo izay hitondra ny alika hitsangatsangana, ny kely koa dia afaka miaraka aminy. Tsy lazaina intsony fa raha mipetraka ao an-trano ianao dia hisy toerana bebe kokoa hilalaovan'ny ankizy amin'ny biby. Izany dia manana fiainana mavitrika kokoa. Zavatra izay atolotra hatrany, satria ankoatry ny fampiroboroboana ny fifandraisana dia mazava ihany koa ny saina, tonga amin'ny fiainany ny fifaliana ary mihalehibe ny fialamboly ary koa ny fahatsapana fahasambarana. Ka orinasa tsara foana ry zareo!
Lasa tompon'andraikitra bebe kokoa izy ireo
Na dia tsy zavatra hitantsika isan'andro na amin'ny andro hafa dia marina fa amin'ny fotoana maharitra dia afaka milaza izany isika ho lasa tompon'andraikitra bebe kokoa ny kely. Satria ho fantatr'izy ireo ny hevitra fototra ary iray amin'ireo tombontsoa hafa ho an'ny ankizy ny fananana alika. Tsy maintsy manamarina izy ireo raha manana rano na sakafo amin'ny fotoana rehetra, ary koa ny zavatra angatahiny amintsika na raha salama na mifanohitra amin'izay izy ireo. Noho izany, manomboka miahiahy ny ankizy ary manana adidy sasany izay tsy maintsy vitan'izy ireo amin'ny fikarakarana ny biby.
Manatsara ny fatorana mifamatotra izy ireo
Toa tombony hafa ho an'ny ankizy ny fananana alika dia ho hainy ny manao namana tsara amin'ny ho avy. Satria izy ireo dia ho lehibe amin'ny iray amin'ireo manan-danja indrindra sy milamina izay azony hananana. Ka io koa dia iray amin'ireo singa fototra amin'ny fianarana sy ny fiainan'ny zaza amin'ny ankapobeny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Mascotas » Ny tombony lehibe ho an'ny ankizy manana alika